China Semi-auto Ultrasonic Tube Filler kanye Sealer HX-006 ifektri kanye nabaphakeli | Umshini we-HX
Tube ukugcwalisa futhi uphawu umshini
Ishubhu ye-Dual Chamber
Ukugcwaliswa kwamabhodlela nomshini wokufaka umsindo
Okuzenzakalelayo Ultrasonic Tube F ...
Ukugcwaliswa kwethubhu kabili nolwandle ...
Ezomnotho Ultrasonic Tube Fi ...
Semi-auto Ultrasonic Tube Filler Futhi Sealer HX-006
Ukunikezwa kwamandla kagesi AC220V / 110V 1PH 50 / 60HZ
Ukugcwalisa Ibanga A: 6-60ml B: 10-120ml
(ingakhetha ngokuya ngevolumu yekhasimende)
Amandla 18-30pcs / iminithi
Uphawu Dia. 13-50mm
Ukuphakama Tube 50-200mm
Ukucindezela Komoya 0.6MPa
Ukusetshenziswa Komoya 0.35m3/ iminithi
Ubukhulu L1300 * W900 * 1550mm
* Ukudla ngamashubhu mathupha, ukukhomba okuzenzakalelayo uphawu lokukhomba, ukugcwalisa, ukufaka uphawu ngokufaka amakhodi, ukuphela kokucheba, ukondla nge-tube.
* Yamukela ubuchwepheshe bokubekwa uphawu kwe-ultrasonic, asikho isikhathi sokufudumeza isidingo, ukubekwa uphawu okuzinzile nokucocekile, akukho ukuhlanekezelwa, nezinga lokwenqaba eliphansi elingaphansi kuka-1%.
* I-R & D ezimele ye-digital ultrasonic yokulandela ngomshini i-generator, asikho isidingo sokulungisa imvamisa, ngomsebenzi wokunxephezela ngamandla, ukugwema ukuncipha kwamandla ngemuva kokusebenzisa isikhathi eside. Kungenzeka ulungise ngokukhululeka amandla asuselwa ezintweni ezenziwe ngoshubhu nosayizi, okuzinzile nobuncane besilinganiso sephutha, ukunweba ubude bempilo kunebhokisi elijwayelekile likagesi.
* I-PLC enesistimu yokulawula isikrini sokuthinta enohlelo lwe-alamu ingabuka ngqo imininingwane ye-alamu esikrinini sokuthinta, ingathola inkinga, ixazulule ngokushesha.
* Isiteshi ngasinye sasingalawulwa ngokuzimela kusikrini sokuthinta, sinobungane ngokulungiswa phakathi kwamashubhu ahlukile. Abasebenzi bangasebenzisa ithubhu eyodwa ukusetha zonke izikhundla, bonge isikhathi esiningi nezinto ezibonakalayo.
* ICam indexing system ingabeka kahle iziteshi eziyishumi zokusebenza.
* Yenziwe ngensimbi engagqwali engu-304, ukumelana ne-asidi ne-alikhali, ukumelana nokugqwala.
* Ayikho ithubhu, akukho ukugcwaliswa, akukho tube, akukho msebenzi wokufaka uphawu, ukunciphisa izinto zethubhu, ukulahleka komshini nokukhunta
* Yamukela umbhobho wokugcwalisa odonsela phansi.
Isetshenziselwa kabanzi ukudla, okwelapha, izimonyo, amakhemikhali kanye nezinye ipulasitiki, i-PE, i-aluminium laminated tube ukugcwaliswa nokufakwa uphawu.
1. Iphampu yokugcwalisa ngokuzenzakalela
2. Ibhantshi lejakhethi elimbili elinomsebenzi wokushisa nokuvuselela
3. 316L Engagqwali izingxenye contact
4. Umbhobho wokuklanywa komoya womoya wezinto ezibonakalayo ezinamathele
5. Uzimele nomnyango wokuphepha wawungakhala futhi ume
Langaphambilini Okomnotho we-Ultrasonic Tube Filler kanye neSealer HX-002
Olandelayo: Ukugcwalisa kabili ishubhu yomshini HX-009S
Okuzenzakalelayo Tube Filler Futhi Sealer
Plastic Tube Filler Futhi Sealer
Tube Filler Futhi Sealer
Shenzhen Hengxing Impahla Machine Co., Ltd.